Oromo cambaareysay dowladda Somaliland - BBC News Somali
Oromo cambaareysay dowladda Somaliland
24 Jannaayo 2016
Jaaliyadda Oromada ee gobolka Minnesota ee dalka mareykanka ee asalkooda ka soo jeeda dalka Ethiopia ayaa cambaareeyay dadka Oromada ah ee dhawaan laamaha ammaanka Somaliland ay ka raafayeen Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee Somaliland.
Hoggaamiyeyaasha jaaliyaddani oo shir jaraa'id oo ay arrintaasi uga cabanayeen ku qabtay magaalada Minneapolis ayaa waxa ay ka digeen musaafurinta dadka qowmiyadadasi ee Ethiopia loo musaafurinayo ay keeni karto xasillooni daro ka dhalata Geeska Afrika.
Haddaba shirkaasi jaraa'id kaddib ayuu weriyaha BBC-da Maxamed Xaaji Xuseen Shiine waxa uu si wada jir ah u waresytay Saamiya Cismaan oo ka mid ah guddiga haga bulshada Oromada, Saabid Yuusuf Hassan oo ah xiriiriyaha bulsha Oramada iyo bulshooyinka kale iyo Mukhtaar Adeero oo ah nin fanaan caana ah, waxa uuna ku hormaray Saamiya oo uu weydiiyay waxa ay ka cabanayaan.
Maqal Kismaayo oo uu ka furmay shir looga arrinsanayo la tacaalidda cudurka dabaysha
Kismaayo oo uu ka furmay shir looga arrinsanayo la tacaalidda cudurka dabaysha
Maqal Haweeeney magaalaad Muqdisho lag gudoonsiiyay abaal-marin aadan maleysan karin
Haweeeney magaalaad Muqdisho lag gudoonsiiyay abaal-marin aadan maleysan karin
Maqal Muxuu horseedi karaa weerarkii lagu qaaday ciidammada Iran ee Ahvaz?
Muxuu horseedi karaa weerarkii lagu qaaday ciidammada Iran ee Ahvaz?
Maqal Beelaha Jareer-weyne oo ka hadlay heybsooca iyo dhibaatooyinka lagu hayo
Beelaha Jareer-weyne oo ka hadlay heybsooca iyo dhibaatooyinka lagu hayo
Maqal Yuusuf Daba-geed oo markale loo magacaabay guddoomiyaha gobolka Hiiraan
Yuusuf Daba-geed oo markale loo magacaabay guddoomiyaha gobolka Hiiraan
Maqal Booliska Soomaaliya maxay ka yirahdeen dilalkii ka dhacay Muqdisho?
Booliska Soomaaliya maxay ka yirahdeen dilalkii ka dhacay Muqdisho?